ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား
ရေးပြီးချိန်: 3/29/2008 10:45:00 AM
လုပ်သင့်တာတွေ ကို လုပ်နေပါတယ် ... :D
Now Les Paul is 93 years old and still playing guiter ataJazz club in New York every Monday. I watched his show last week and one more thing to admire him is that he can use only2fingers to play guiter because of arthritis.
သတိ kijar ဆိုတဲ့လူက virus link ဟုထင်ရသော link ပေးထားပါတယ်.... click မလုပ်ကြပါနဲ့...
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မစိုးဝှက်ရေ.....
ကိုစိုးထက်၊ ကိုဝေတိုး၊ ကိုညီအကိုများ... ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုညီအကိုများ remind လုပ်ထားတာကို ကျေးဇူးနော်။ အဲဒီကွန်မန့်တွေ ဖျက်လိုက်ပြီ။